नयाँ सुरुवातका बारे बाइबली संस्करणहरू | प्रार्थना अंकहरू
घर बाइबल पदहरू नयाँ शुरुवातहरूको बारेमा बाइबल पदहरू
आज हामी नयाँ सुरुवातको बारेमा बाइबल पदहरूमा संलग्न हुनेछौं। कसले कडा परिश्रम र कठिनाईको पछि एक नयाँ सुरुवात चाहँदैन? हामी सबै नयाँ सुरुवात पाउन योग्य छौं जब अन्तमा हामीले महसुस गर्छौं कि हामी त्यो बेला गल्ती भएको छौं। पश्चाताप र ख्रिष्टलाई हाम्रा प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार गरेपछि नयाँ सुरू हुन्छ, त्यसबेलादेखि हामी नयाँ जीवन, पाप र अधर्मबाट मुक्त जीवन शुरू गर्दछौं। एक अनौंठो अनुभव जुन येशू ख्रीष्ट द्वारा पालनपोषण र ट्यूटोरियल हुनेछ।
एक नयाँ सुरुवात तब हुन सक्छ जब एक मानिसको जीवनमा परमेश्वरले आफ्नो करार सुरु गर्न चाहनुहुन्छ। उदाहरणका लागि, बुबा अब्राहमको नयाँ सुरुवात थियो जब परमेश्वरले उनलाई उसको र सिद्धताको अघि हिड्न आज्ञा दिनुभएपछि, र उसले उनीसँग आफ्नो करार स्थापित गर्नेछ। उनको नाम अब्रामबाट परिवर्तन गरी अब्राहाम राखियो र परमेश्वरले अब्राहमको सम्बन्धमा भएको दीर्घकालीन करार स्थापना गर्न शुरू गर्नुभयो।
हामी पनि हाम्रो व्यक्तिगत जीवनमा नयाँ र अझ राम्रो सुरूवात पाउन योग्यका छौं, जुन जीवन सर्वशक्तिमान परमेश्वरको महिमा र उपस्थितिले भरिएको छ। बाइबलले भन्छ कि जो येशू ख्रीष्टमा हुनुहुन्छ उहाँ नयाँ जीव बन्नुभयो र पुरानो चीज बितेर गए, हेर, अब सबै नयाँ छ। हामीमा ख्रीष्टको जीवनले हाम्रो निम्ति यस्तै गर्न सक्दछ। हामी येशूलाई हेर्दा पुराना कुराहरु बिर्सनेछौं। चाहे तपाईं गम्भीर पापी हुनुहुन्छ, एक बलात्कारी, सशस्त्र डाँकू, वेश्या, भाडामा लिएको हत्यारा वा जे पनि, येशू भित्र आउनुहोस्, र तपाईंको नयाँ जीवन हुनेछ।
पुरानो प्राणी क्रूसमा राखिनेछ जब हामी येशूलाई वास्तवमा हाम्रो व्यक्तिगत प्रभु र मुक्तिदाताको रूपमा स्वीकार्छौं, र हामी नयाँ येशूमा फरक चरित्र व्यक्त गर्न थाल्नेछौं। हामी जति धेरै परमेश्वरको ज्ञानमा बढ्दै जान्छौं त्यति नै ईश्वरीय चरित्रको प्रदर्शन गर्छौं। मानिस भ्रमित हुनेछन्, जस्तो कि यो तपाईं जस्तो पुरानो होईन। साथै, आर्थिक रूपमा, जो कोही एकदम गरीब छ, भगवानले कुनै समय बिना नै कथा बदल्न सक्नुहुन्छ, र यसले सबैलाई छक्क पार्छ कि उनीहरूलाई यो विश्वास गर्न गाह्रो हुन्छ कि यो तपाईं पुरानो हो।
यदि तपाईं नयाँ सुरूवात चाहनुहुन्छ भने, हामी तपाईंलाई पढ्न र राम्रोसँग अध्ययन गर्नको लागि बाइबल पदहरूको सूची कम्पाइल गरेका छौं। राम्ररी पढ्नुहोस् र यसलाई बारम्बार अध्ययन गर्नुहोस् जब सम्म तपाईं आफ्नो जीवनमा स्पष्ट परिवर्तनहरू देख्नुहुन्न।
२ कोरिन्थी:: १-2-२० यसैले अबदेखि हामी कुनै मानिस जस्तो शरीरलाई चिन्दैनौं। हो, हामी ख्रीष्टलाई शरीरअनुसार चिन्छौं, तर अब हामी उहाँलाई चिन्दैनौं। यदि कोही ख्रीष्टमा छ भने, ऊ नयाँ सृष्टि हो: पुरानो चीज बितेर गयो; हेर, सबै कुरा नयाँ भएका छन्। सबै कुरा परमेश्वरबाटका हुन्, जसले हामीलाई येशू ख्रीष्टद्वारा आफैंमा मिलाप गर्नुभयो, र हामीलाई मेलमिलापको सेवा दिनुभयो। यो कुरा मान्नुपर्दछ कि, येशू ख्रीष्टमा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो, संसार आफैंमा मेलमिलापको निम्ति, उनीहरूका अपराधलाई दोष लगाउनु हुन्न। र हामीलाई मेलमिलापको वचन प्रतिबद्ध गरेको छ। Christ अब हामी ख्रीष्टको लागि राजदूतहरू हौं, जस्तो कि परमेश्वरले हामीबाट तिमीहरूलाई बिन्ती गरिरहनुभएको छ: हामी ख्रीष्टको पक्षमा तिमीहरूलाई बिन्ती गर्छौं, परमेश्वरसित मिलाप गर।
लूका :7:47 - यसैले म तिमीलाई भन्दछु, तिका धेरै पापहरू क्षमा भए। उसले धेरै माया गरिन। तर जसलाई थोरै क्षमा गरिएको छ, उही थोरैलाई माया गर्छ।
यशैया :42२:१:16 म अन्धा मानिसहरूलाई तिनीहरूका मार्गमा ल्याउनेछु, जसलाई उनीहरूले चिन्दैनन्। म तिनीहरूलाई ती पथहरूमा डोर्‍याउँछु जुन तिनीहरूले मलाई चिन्दैनन्। म तिनीहरूका अँध्यारोलाई प्रकाशमा बद्लि दिनेछु, र कुटिल चीजहरू सीधा बनाउँनेछु। म तिनीहरूलाई ती चीजहरू दिनेछु। म तिनीहरूलाई त्याग्ने छैन।
यशैया: 43: १-18-२० नबिर्सनुहोस्, पुरानो कुराहरुको सम्झना नगर, न पुरानो कुराहरुको बारेमा विचार गर। हेर, म नयाँ कुरा गर्नेछु। अब यो उम्रनेछ। के तिमीलाई यो थाहा छैन? मरुभूमिमा पनि बाटो बनाउने छु। क्षेत्र को जनावरको मलाई आदर गर्नेछु, र ड्रेगन र Owls: म, मरुभूमिमा उजाडस्थानमा पानी र नदी दिन मेरो मान्छे, मेरो चुनिएको गर्न पेय दिन।
एफिसी:: २२-२4 जुन तपाईंले पहिलेको वार्तालापलाई त्याग्नुभयो जुन बूढा मानिस हो, जो कपटी अभिलाषाहरू अनुसार भ्रष्ट छ; र आफ्नो दिमागमा नयाँ बनाउनुहोस्; अनि तपाईंले त्यो नयाँ मानिसलाई पहिरिनुभयो, जो परमेश्वर पछि धर्मी र साँचो पवित्रतामा सृजनुभयो।
कार्य:: 8-6 यदि तपाईं शुद्ध र सीधा खोज्नुहुन्छ भने; अब उसले तपाईंको लागि जागा रहनेछ र तपाईंको धार्मिकतालाई बासस्थान बनाउनेछ। यद्यपि तपाइँको सुरूवात थोरै थियो, तर तपाइँको पछिल्लो अन्त बढ्नेछ।
लूका 7:47 यसकारण म तिमीलाई भन्दछु कि उसको धेरै पापाहरू क्षमा भयो। उनी धेरै माया गर्छिन्, तर जसलाई थोरै माफ गरिन्छ, उही थोरै माया गर्छ।
१ पत्रुस १: lessed हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको परमेश्वर र पिता धन्यका होऊन्, जो उहाँको प्रशस्त कृपाअनुसार हामीलाई फेरि जीवित पार्नुभयो, येशू ख्रीष्टको पुनरुत्थानद्वारा उहाँ मृत्युबाट ब्यूँतनुभयो।
उपदेशक :3:११ परमेश्वरले आफ्नो समयमा प्रत्येक चीजलाई सुन्दर बनाउनु भएको छ। संसारलाई तिनीहरूको हृदयमा राखिएको छ, ताकि परमेश्वरले सुरुदेखि अन्तसम्म गरेका कामहरू कसैले पत्ता लगाउन सक्तैनन्।
भजनमा 40:3अनि उहाँले मेरो मुखमा नयाँ गीत राख्नु हाम्रो परमेश्वरको निम्ति पनि प्रशंसा पार्नु भएकोछ: धेरै हेर्न गर्नेछु, र डर, र परमप्रभुले भरोसा गर्नेछ।
यशैया :65 17:१:XNUMX किनकि हेर, म नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी बनाउनेछु, तर अतीतका मानिसहरूले सम्झने छैनन्।
इजकिएल 11:19 म तिनीहरूलाई एकै हृदय प्रदान गर्नेछु। म तिनीहरूमा नयाँ आत्मा हालिदिनेछु। म तिनीहरूको ढु of्गाको हृदय तोडेर त्यो ठाँउमा साँचो हृदय भरिदिनेछु।
भजनसंग्रह::: १- O परमप्रभुका निम्ति एउटा नयाँ गीत गाओ; right।।:।।।।,।।।।। he he he he he right right his right right right right right right right right right right right right right right right right right his right right right right right right right right right right right right right right right right his right right right right right right right right right right right his his right right his his right his his his his right right right right right his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his his परमप्रभुले भएकोछ आफ्नो मुक्ति चिनाइयो: उहाँको धार्मिकता उहाँले खुल्लमखुल्ला को heathen को दृष्टि मा shewed पार्नु भएकोछ। उहाँले आफ्नो कृपा र इस्राएलका घर तिर आफ्नो सत्य सम्झना भएकोछ: पृथ्वीको सबै समाप्त हाम्रो परमेश्वरको मुक्तिको देखेको छ।
अघिल्लो लेखमादयालु सम्बन्धमा बाइबली वर्स
अर्को लेखमाआध्यात्मिक लडाई दिमागका लागि प्रार्थना